Niutech @ 2018 Munich IFAT - China NIutech Imvelo
Industrial Ukusingathwa Okuqhubekayo Plastic Pyrolysis Production Line
Industrial Okuqhubekayo Scrap iTire Pyrolysis Production Line
Amafutha Sludge Pyrolysis Plant
Industrial Okuqhubekayo Amafutha Sludge Pyrolysis Production Line
Industrial Okuqhubekayo Ukusingathwa Rubber Pyrolysis Production Line
Ikhulu Lama-20-International Fair for Environmental Protection (IFAT) e Munich, waba grandly ebibanjelwe New International Expo Center e Munich kusukela ngo-May 14 kuya ku-May 18, 2018. I Munich Expo yasungulwa ngo 1966, onguchwepheshe wezohwebo kunazo zonke emhlabeni for nokuvikelwa kwemvelo . Njengoba omunye nemibukiso ezinkulu zamazwe ngamazwe eliqinisekiswe yi UFI, kuholela mkhuba yakamuva yamazwe ngamazwe umkhakha nokuvikelwa kwemvelo futhi waqaphela njengoba inkomba yomhlaba wonke.
IFAT ubelokhu eqashelwa ngempumelelo 19 amaseshini iyona enkulu kunazo zonke futhi okubaluleke kakhulu wezohwebo for the kwemvelo Ukuvikelwa umkhakha. Lo mbukiso wezinsuku ezinhlanu ihlanganisa indawo ka 260.000 square metres. It has 18 emikhulu embukisweni amahholo nezindawo embukisweni ezintathu ongaphandle. Kuye baletha ndawonye 3.304 umbukiso kusuka emazweni 59 futhi kwaheha ezingaphezu kuka 135.000 izivakashi global lobuchwepheshe emazweni 168 ukuvakashela futhi baxoxisane.
IFAT Expo bezilokhu uthathwa njengoba ithuba kubalulekile ezifuywayo umkhakha nokuvikelwa kwemvelo ukungena ezimakethe zomhlaba jikelele. Izinkampani eziningi owaziwa basekhaya nabamazwe angaphandle kwemvelo Ukuvikelwa babe iqhaza kuloku Expo futhi uboniswa ehamba phambili nokuvikelwa kwemvelo ubuchwepheshe emhlabeni zabo. Niutech Imvelo Technology Corporation (ezobizwa emva kwalokhu ngo "Nituech") kuletha ngamazwe ehola imishini pyrolysis ubuchwepheshe IFAT. It hhayi kuphela uthemba ukuba sandise ibhizinisi layo international ngokusebenzisa le platform Ukuhweba inkulu, kodwa futhi alethe izwe ukubona ukwanda umkhakha nokuvikelwa kwemvelo China sika, ngaphezu kwalokho, ukubamba leli thuba ukuqhuba izingxoxo kanye Ukuhwebelana nge emadokodweni elite kusuka emhlabeni wonke, nokubonisa izwe isitayela kanye namandla we izinkampani China kwemvelo nokubusa ngendlela yonke-round, multi-level, futhi ezahlukene.
China futhi igunyazwe yi-EU CE futhi eJalimane TUV. Ubuchwepheshe kanye nemishini singasebenza anhlobonhlobo izicelo futhi ingasetshenziswa kuze udoti polymers ephezulu yamangqamuzana ezifana udoti amathayi, imfucuza zepulasitiki, uwoyela kodaka, izinhlobo ezahlukene samafutha angcolile, uwoyela asalile, amakhemikhali imfucuza, kukadoti , futhi wezinto zokubasa. Lokhu kusebenza zithunyelwa Germany, Brazil, Hungary, Estonia, India, eThailand, eMalaysia, e-Iraq, Taiwan nakwamanye amazwe kanye izifunda, baye wathola udumo ngazwilinye evela kumakhasimende.
Nge ekuphumeni nokubusa nezidingo China kwemvelo, ukufunwa ubuchwepheshe kwemvelo Ukuhwebelana phakathi zasekhaya nakwamanye amazwe siyaqhubeka sikhula. Njengoba umongo yeYurophu, eJalimane ingenye izikhungo emhlabeni ukuhweba ngobukhulu ikakhulukazi yesikhulumi oluncamelayo izinkampani Chinese ukubonisa imikhiqizo kanye nobuchwepheshe ngqo emhlabeni. Njengoba inkampani Chinese, Niutech hhayi kuphela limelela amandla brand futhi lobuchwepheshe ezingeni yenkampani, kodwa futhi sibonisa amandla yokuvikela umkhakha China zemvelo. Niutech ngeke bachitha ukuzinikezela yayo ezimakethe zomhlaba jikelele nokwakha omunye phezulu abakhiqizi global imishini nokuvikelwa kwemvelo kanye nokwelashwa kwemvelo inkonzo ubuchwepheshe abahlinzeki.
isikhathi Thumela: Jul-11-2018
Kufanele Waste iTire Ekugcineni Thola?